xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်အောင် ရန်စပေးခြင်းနဲ. ဒေသအတွင်းက လက်နက်အပြိုင် တပ်ဆင်မှု
နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်အောင် ရန်စပေးခြင်းနဲ. ဒေသအတွင်းက လက်နက်အပြိုင် တပ်ဆင်မှု
အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေက ဒေသအတွင်းမှာ လွှမ်းမိုးမှုတွေကြီးအောင် ထိမ်းချုပ်မှုတွေ ရှိအောင် အားထုတ်လာတာနဲ.အမျှ ဒေသတွင်းက နိုင်ငံငယ်လေးတွေမှာ လက်နက်ပြိုင်ဆိုင်မှု-Arms Race တွေ ဖြစ်လာရတတ်ပါသည်။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်တွေ စစ်ရေး ခြိမ်းခြောက်မှု တွေမြင့်လာတော့ စစ်အသုံးစရိတ် စစ်စရိတ် ကာကွယ်ရေး စရိတ်တွေ တိုးသုံးရပါတော့သည်။
ဒီလိုဖြစ်လာရင် ဘယ်သူတွေ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေပြန်ပါလဲ။ အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတွေပဲ လက်နက်အသစ်အဆန်းတွေကို ရောင်းခွင့်ရပြန်တာ မဟုတ်ပါလား။ ဒီတော့ ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ပဲ တမင်ဖန်တီးပြီး အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတွေကပဲ ကစားနေသလို ယူဆနိုင်ပါသည်။
အာရှဖိစိဖိတ်ဒေသမှာ တရုတ်နဲ.အမေရိကန်တွေ လွမ်းမိုးဖို. အားပြိုင်လာတဲ့အခါ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ စစ်သုံးစရိတ်တွေ မြင့်လာဖို.ရှိပြီး စစ်တပ်နဲ. စစ်လက်နက် အသစ်တွေ ခေတ်မှီဖို. လုပ်ရမည်လို. အဲဒီနိုင်ငံတွေ၏ စစ်ဦးစီးချုပ်တွေက ထုတ်ပြောလာပါ သည်။
တရုတ်နဲ. ထိုင်ဝမ်အကြား နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေ မြင့်လာရင် ထိုင်ဝမ်တွေဟာ အမေရိကန် တွေဆီက ဒေါ်လာဘီလျံ အကုန်ခံပြီး တိုက်လေယာဉ်အသစ်တွေ ခေတ်မှီ လက်နက်တွေ ထပ်ပြီး ၀ယ်ရပါသည်။ ထို.အတူ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ. ဒေသအတွင်းမှာ တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်လာတိုင်း တောင်ကိုးရီယားနဲ. ဂျပန်တို.ဟာ အမေရိကန်တွေဆီကနေ ကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက်အရ အကူအညီတွေ ရဖို. ငွေတွေ ထပ်သုံးရတာတွေလဲ ရှိပါသည်။
ဒီတော့ ဒေသအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေး Hot- Spot ဖြစ်နေခြင်းဟာ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအတွက် လက်နက်တင်ပို.ရောင်းချမှုအတွက် ရောင်းအား သွက်စေပြီး နိုင်ငံရေးအရ Hot-Spot ဖြစ် တိုင်း ဒေသအတွင်းမှာ လက်နက်အားပြိုင်မှုတွေ လက်နက်အပြိုင်အဆိုင် တတ်ဆင်မှုတွေ တိုးလာမြဲပါ။
အရှေ.အလယ်ပိုင်းမှာလဲ အီရန်လို နိုင်ငံမျိုးကို လူရမ်းကားအဖြစ် Fear Factor လုပ်ထားနိုင် မယ်ဆိုရင် ဆော်ဒီ၊ ကူဝိတ်နဲ. ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွေဟာ အီရန်၏ ရန်ကို စိုးရိမ်ကြောက်လန်. စိတ်နဲ. အမေရိကန်ဆီကနေ ဒေါ်လာ သန်းဘီလျံချီ တန်ဘိုးရှိတဲ့ စစ်လက်နက်တွေကို သူ. ထက် ငါ သာအောင် ဦးအောင်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ. ၀ယ်ယူကြလေ့ရှိပါသည်။ ဒါကြောင့် အနောက်နိုင်ငံတွေကလဲ အီရန်၊ လဘနွမ်၊ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံရေး လုံခြုံရေး တင်းမာ မှုတွေ ဖြစ်အောင် ဆွပေး ဖွပေး မွှေပေးခြင်းဖြင့် ဒေသအတွင်းက နိင်ငံတွေ၏ စစ်လက်နက် ဈေးကွက်ကို ကြီးအောင် မြင့်တတ်ပါသည်။
ဒါမှာလဲ သူတို.ဆီကနေ ရေနံဝယ်ထားတဲ့ငွေတွေ ပြန်ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာ စစ်ရေးလုံခြုံရေးအရရော စီးပွားရေးအရပါ အဲဒီ နိုင်ငံတွေဟာ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပေါ် မှီခိုမှုတွေ ပိုပြီး များလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အခုလဲ ဒေသအတွင်းမှာ အီရမ်၏ နယူးကလီးယားကိစ္စကို များများဖွပြီး တဖက်ကလဲ ရန်စသလိုမျိုး လုပ်ပြီး တင်းမာမှုတွေ မြင့်လာနေတာကြောင့် အရှေ.အလယ်ပိုင်းမှာ လက်နက်ပြိုင်ဆိုင်တတ်ဆင်မှု Arms Race တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
ထို.အတူပဲ မြန်မာပြည်မှာလဲ ကရင်ပြည်နယ်မှာ နိုင်ငံရေး တင်းမာပြီး စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နေရင် ထိုင်းဖက်က စီးပွားရေးသမားတွေနဲ. လက်နက်မှောင်ခိုတွေ အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကချင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေရင်တော့ တရုတ်တွေ ပွတာပေါ့။ စစ်တိုက်ဖို. ငွေလိုတယ်အခါ သစ်တောတွေ ကျောက်တွင်းတွေနဲ. ရှိတဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကို ဈေးပေါပေါနဲ. ချရောင်းရပြီး လိုတဲ့ စစ်လက်နက်တွေကိုလဲ အဲဒီနိုင်ငံတွေကတဆင့် ပြန်ဝယ်ကြလေ့ရှိပါသည်။ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး မှောင်ခိုသမားနဲ. အစိုးရတွေဆိုတာကလဲ ခပ်ပါးပါးလေးပဲ ကွဲတာပါ။ ခွဲခြားဖို. ခက်ပါသည်။
ဒီတော့ မြန်မာပြည်က သစ်တောတွေလဲ ငွေလိုလို. သစ်ထုတ်ရောင်းလို. တောပြုန်းတာ ရှိသလို စစ်ပွဲတွေကြောင့် ဗုံးဒဏ် အမြောက်ဒဏ်တွေကြောင့်လဲ တောင်ကတုံးတွေ တောမီးလောင်ရတာတွေလဲ ရှိပါသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တောတွေ တောင်တွေ ကတုံးတွေ ဖြစ်ကုန်တာဟာ စစ်ပွဲတွေဆိုတဲ့ ကင်ဆာနဲ. တိုက်ရိုက် ပတ်သက်တာ ဆိုးကျိုးတွေဆိုတာ ငြင်းမရပါ။
ဒါကြောင့် ဒေသအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်ပဲ လုံခြုံရေးနဲ. စစ်ရေးတွေ ပူမယ် ဆူဆူပူပူနဲ. ပြသာနာတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် လက်နက်ရောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက် အကျိုးအမြတ်တွေ အများလေဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့ ပြသာနာတွေ ပြေလည်နေတာ တည်ငြိမ်နေတာထက် ဆူဆူ ပူပူနဲ. တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးထားခြင်းက နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးအရ လွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့အပြင် လက်နက်တွေ ထုတ်ရောင်းနိုင်ဖို.အကောင်း ဆုံး ဈေးကွက်ဖန်တီးရေးနည်းတွေများ ဖြစ်နေသလား စဉ်းစားစရာ မေးစရာပါ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 10:32 PM
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်
အထူးပါမစ်ယာဉ်မျိုးစုံ ၇၄၇၆ စီး အခွန်စည်းကြပ်ပေးပြီ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပမည့်နေ့ရက် သတ်မှတ်ေ...
လေးစားထိုက်တဲ့ သားကောင်းတစ်ဦး ( သို့ ) ဦးကြည်ဝင်...
နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်အောင် ရန်စပေးခြင်းနဲ. ဒေ...
မီးသတ်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသင်းဋ္ဌေးရွှေနဲ့ အ...
လေးစားထိုက်သည့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ...
ရန်ကုန်မြို့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု၏ နောက်ဆက်တွဲသတင်း
ရန်ကုန်မြို့ နေရာသုံးခုတွင် ဗုံးထောင်ရန် ကြံစည်သူန...
နာမည်ကျော် Iron Cross တေးဂီတ မိသားစု ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
" NLD မှာပညာတတ်မရှိပါဘူး "လို့ ဇာဂနာပြောဆိုခဲ့ကြော...
သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ထံ ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ တောင်းပန်လျှောက...
ရုရှားအစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု ထပ်မံဖြစ်ပ...
အပြောင်းအလဲနောက် လိုက်ပါလာသော ကြေးမုံသတင်းစာ
အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင် - ရွှေပြည်သာ)က အဓမ္မ၀ါဒကို စွန့်လ...
Eleven Media အားဆန့်ကျင်သည့် ပုံတစ်မျိုး အွန်လိုင်...
Air force weapons in focus of 2011
NLD နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေ့ဆုံ
Best natural & scientific photos of 2011: AFP
BOT ဆိုတာနဲ့ ငွေကောက်မယ်ထင်နေတဲ့ Eleven ကသန်းထွဋ်...
Naypyitaw International Airport Project
Eleven Media အယ်ဒီတာချုပ် ဝေဖြိုးက EMG ကိုဝေဖန်သူမ...
Eleven Media က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အား ဆဲဆိုသည့် com...
4th GMS Summit Photos (2)
4th GMS Summit Photos
အီရန်က ဖမ်းမိထားတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး (...
စိတ်ပျက်မိတယ် Eleven Media ရယ်.....
ဗြိတိန်တွင် ပင်စင်ဖြတ်တောက်မှုကြောင့် သန်းနှင့်ချီေ...
ရွှေည၀ါဆရာတော်နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတ်ာသံဃာ့မဟာနာယက အ...
မြန်မာလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က တိုက်ပွဲများ ရပ်စဲရ...
ကမ္ဘာ့အဂတိ လိုက်စားမှုအဆင့် ၃ နေရာ မြန်မာအားသတ်မှတ်ြ...
ဂျပန်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ GSM ဖုန်းများ ပြည်တ...
အမေရိကန် မောင်းသူမဲ့ထောက်လှမ်းရေးလေယာဉ် ကျူးကျော်မ...
အင်အားကြီးမားသော ဆန္ဒပြမှုနှင့် ရုရှားအစိုးရရင်ဆိုင်...
နားထောင်နေရင်း ရှက်လာလို့ပိတ်လိုက်ရတဲ့ NLD မဲဆွယ်သ...
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလုပ်ကြမလား ၊ စိတ်ဓါတ်တွေကိုပြင်မလား...
Myanmar လား Burma လား
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်း လှည့်လည်ခွင့်...
ကို့ကိုယ်ကို အရင်ပြင်ရမည့် မြန်မာ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်
စိတ်ပျက်မိတယ် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ရယ် ( ၄ )
စိတ်ပျက်မိတယ် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ရယ် ( ၃ )